Nin muddo 25 sano ah sixirka ku shaqeeysanayay iyo nin gacan yare u ahaa oo la qabtay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin muddo 25 sano ah sixirka ku shaqeeysanayay iyo nin gacan yare u ahaa oo la qabtay (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in ciidamada booliska ee magaaladaasi ay gacanta ku dhigeen nin sixiroole ah iyo sidoo kale nin kale oo gacan yare u ahaa ninkaasi oo muddo 25 sano ah sixirka ku shaqeeysanayay.
Taliyaha ciidamada booliska ee saldhiga bartamaha magaalada Boosaaso G/Sare Yuusuf Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in labadaasi nin ee sixirka ku shaqeysan jiray laga soo qabtay guri ku yaalla magaaladaas.
G/sare Yuusuf Axmed ayaa saxaafadda usoo bandhigay alaabo kala duwan oo uu sheegay inay labadaasi nin u adeegsan jireen sixirka, kuwaas oo ka koobnaa lafo ari oo shiilan, loox lagu dhajiyay masaamiir, caws, baalka xayawaanka loo yaqaan caana-qubta, salool buskud iyo waxyaabo kale.
“Ciidanka booliska ayaa nimankaan sixirooleyaasha ah soo qabtay, waxayna keeneen saldhiga ku yaalla bartamaha Boosaaso, waa niman saaxiriin ah oo dadka sixri jiray, maadaama ay saaxiriin yihiin baaris ayaa ku socota, waxyaabahaan ay wataan gurigooda ayaa laga soo qaaday” Sidaasi waxaa yiri taliye Yuusuf Axmed.
Maxamed Cismaan Yuusuf oo da’diida lagu qiyaasay 50 jir, islamarkaana ah ninka sixiroolaha oo ay gacanta kusoo dhigeen ciidanka booliska ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inuu shaqadaan kusoo dhex jiray muddo 25-sano ah.
“Waxaan shaqadaan kusoo dhex jiray muddo 25-sano ah oo aan joogay magaalada Boosaaso, waxaana intaasi dadka ka garaaci jiray mingiska iyo rooxaanta, waxaana la isoo xiray anigoo gurigayga jiifo oo jaad iska cunaya” Ayuu yiri Maxamed Cismaan
Sidoo kale, wuxuu Maxamed Cismaan sheegay in lafaha iyo cawska lagu soo qabtay ay kusoo dejin jireen rooxaanta, islamarkaana ay sidaasi dadka lacagaha uga qaadan jireen, hadii ay noqon lahayd 50 doolar, iyo inkaleba.
“Lafaha rooxaanta ayaan kusoo dejinaa, waana sharaxnaa lafaha ka dibna waxaan saarnaa cawska, dadka lacago ayaan ka qaadanaa, kuwo 50 doolar ayaan ka qaadi jirnay, halka kuwo kalena aan lacago kale ka qaadan jirnay” Ayuu hadalkiisa raaciyay Maxamed Cismaan.
Dhinaca kale, taliye Yuusuf Axmed ayaa sheegay in dhawaan sharciga la horgeyn doonno nimankaan saaxiriinta ah ee gacanta lagu soo dhigay, isagoona sidoo kale sheegay inay jiraan dad xanuunsan oo muddooyinkii ugu dambeysay ka cabanayay in la sixray, isagoo xusay in kiiskaan muddo badan la daba joogay.
Ugu dambeyn, taliyaha ayaa sheegay inay magaalada Boosaaso ka billaabayaan olole ballaaran oo lagu soo qab-qabanaayo dadka waxyaabaha sixirka ah ku shaqeysta, isagoona dhinaca kale ugu baaqay shacabka ku nool magaaladaasi inay muujiyaan feejignaan, kana foggaadaan saaxiriinta ku shaqeysata waxyaabaha sixirka ah.